Degmada Feerfeer iyo Mashaariicaha ka socda - Cakaara News
Degmada Feerfeer iyo Mashaariicaha ka socda
Feer-feer( cakaaranews ) Sabti 19ka March 2016 Waxaa meel fiican maraya shaqooyinkii dhismaha mashaariicda biyo-xidheenada ee laga waday tuulooyinka hoos yimaada Degmada Feer-feer ee katirsan Gobalka Shabeele.
Hadaba Gudoomiyaha Degmada Feer-feer mudane Maxamed Khadar Faarax oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in ay sifiican u socoto dhismaha mashaariicda Biyo-xidheenada islamarkaana ay kasocdaan tuulooyinka kala ah Ashraaf, Cidhiidhiga iyo waliba garoonka. Wuxuuna sheegay gudoomiyuhu in waxtar wayn kaqaadan doonaan biyo xidheenadani baahida bulshada ee dhanka biyaha. Sidookale waxa uu xusay in biyo xidheenada kasocda qabalaha cidhiidhiga iyo Garoonka ay dhamaadeen 90% meesha biyo xidheenka kasocda Tuulada Ashraaf uu meel wanaagsan marayo wakhti dhawna uu dhamaystirmi doono hadii alle idmo.
Ugudanbayna wuxuu gudoomiyuhu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay in dhismaha masharricdani ay leeyihiin gudiyo iskudhaf ah iyo waliba dabagal islamarkaana uu markasta kormeer kusameeyo maamulka degmadu iyada oo ay bulshaduna siifiican uga qayb qaataan dhisamaha mashaariicdan biyo xidheenada ah.
Sidookale Madaxa xafiiska maaliyada iyo hormarinta dhaqaalaha Marwo Ruqiya Shekh Ismaaciil Cumar ayaa sheegtay in ay Degmada feerfeer kasocoto sadex biyo-xidheen islamarkaana ay kasocdaan sadex goobaad oo kaladuwan kuna haboon biyo xidheenada. Sidookale waxay xustay marwadu in iyana shaqaalihii lasoo shaqaalaysiiyay ay soo gaadheen degmada sifiicana ay u wadaan shaqooyinkii horumarineed ee ay ku kala qoraayeen.